The University of Newcastle - Mmụta dị elu na mba ofesi
Nkọwa nke Mahadum Newcastle
Echefukwala tụlee Mahadum Newcastle
Debanye aha na Mahadum Newcastle
The University of Newcastle (UoN), -anọghị n'ozi maara dị ka Newcastle University, onye Australia ọha mahadum guzosie ike 1965, nwere ya isi n'ogige ụlọ akwụkwọ na Callaghan, a dịpụrụ adịpụ na Newcastle, New South Wales. The mahadum na-arụ ọrụ campuses na Ourimbah,Port Macquarie, Singapore na Central ógbè azụmahịa nke Newcastle na Sydney.
Kemgbe ụwa, Mahadum Newcastle Medical School nwere emejuputa atumatu nsogbu dabeere mmụta usoro maka undergraduateBachelor nke Medicine omume - a usoro mgbe e mesịrị chọrọ maka site na Australian Medical Council ofụri Australia. Ọ sụrụ ụzọ ojiji nke Undergraduate Medicine na Health Sciences Admission Test (NDỊ mmadụ) na akpa 1990s. UMAT ka ebe e kwetara n'ọtụtụ ebe site dị iche iche ọgwụ na ahụ ike na ụlọ akwụkwọ gafee Australia ka ihe ndị ọzọ nhọrọ ibiere.
The University of Newcastle bụ onye so Universities Australia na Association ka Advance Collegiate Schools of Business.
na 2015 Times Higher Education họọrọ ndị University of Newcastle nọmba 2 na Australia na ọnụ ọgụgụ 30 na ụwa n'ihi na mahadum n'okpuru 50 afọ.
Wuru na ụkpụrụ nke hara nhatanha, mma na njikọ aka, Mahadum Newcastle nwere a aha dị ka a ụwa-klas alụmdi na-eme ka onye na mmetụta n'ime ya region, ofụri Australia na gafee n'ụwa.
Anyị research bụ ụwa-klas na iche iche. Anyị ogo omume na-mba dị na anyị mmekọrịta na collaborations ụgbọala ọhụrụ. Anyị Alumni bụ ndị ndú na anyị na ụmụ akwụkwọ na-akwadebe ime ka a iche na nke ụwa.
Anyị na-họọrọ na top atọ pasent nke mahadum uwa dum na anyị naanị dị nnọọ tụgharịa 50.
Na UoN anyị kwere na mmadụ nile na ike na mkpebi siri ike kwesịrị nwere ohere a oké mmụta na kasị mma ọrụ ohere. Anyị rụsiri ọrụ ike iji napụta anyị nkwa nke ohere, na-ekere òkè na ihe ịga nke ọma mmụta. Kwa afọ, ụfọdụ 3,000 ụmụ akwụkwọ idebanye aha na anyị enyere ọmụmụ nke na-enye a n'ụzọ na-eduga a oké mmụta na-akwado ka na-amụba n'ebe ha họọrọ akụkụ mmụta.
Ebe ọ bụ na 1970 anyị mere ihe unparallelled onyinye Ụmụ Amaala mmụta na Australia na anyị na-asọpụrụ ka ndị ha na ụfọdụ n'ime ndị kasị na a mmụta Ụmụ Amaala ụmụ akwụkwọ, ọmụmụ ha na-eme nnyocha na mba. Na fọrọ nke nta ọkara Ụmụ Amaala ọgwụ practitioners na Australian ọ gụsịrị akwụkwọ UoN, anyị maara na anyị na-eme ka a dị iche na ọtụtụ ndụ na obodo, ugbu a ma n'ọdịnihu.
Ụlọ akwụkwọ azụmahịa Newcastle
Ụlọ Akwụkwọ Iwu Newcastle
Faculty of Education na Arts
Ụlọ akwụkwọ nke ihe okike
Ụlọ Akwụkwọ nke Humanities na Social Science
Ngalaba Injinịa na gburugburu ebe obibi
Ụlọ akwụkwọ nke ọkụ eletrik na sayensị kọmputa
Ngalaba Sayensị na Teknụzụ Ozi
School of Design, Nkwukọrịta na teknụzụ ozi
Ụlọ akwụkwọ nke gburugburu ebe obibi na sayensị ndụ
Ụlọ akwụkwọ nke mgbakọ na mwepụ na ahụ ike
Ụlọ akwụkwọ nke sayensị ọgwụ na ọgwụ
Ụlọ Akwụkwọ Ọgwụ na Ahụike Ọha
saịtị ahịhịa dị na Shortland. Ka ndebanye aha na -eto, Mahadum ahụ malitere mmemme nnukwu ụlọ wee rụzigharị saịtị Shortland n'ime ogige Callaghan, Aha ya bụ Sir Bede Callaghan, onye otu ntọala nke kansụl mahadum na chancellor si 1977 ka 1988.
Ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum na -eme emume Autonomy on 1 Julaị afọ ọ bụla. Dabere na isi mmalite ekwenyeghi, akara akara nnwere onwe nke gọọmentị 1 January 1965 na a “ọkụ emume nnọchianya nke emere na nnukwu Ụlọ Nzukọ”. Ekwuru na mmemme a bụ Prọfesọ Godfrey Tanner bụ onye ekwuru na ọ wụsara mmanya mmanya n'ala maka “doo ala ahụ nke Mahadum nọ n'elu ya”. Ebe ọ bụ na mahadum nyochasịrị kwụrụ onwe ya 1 January 1965 Ekwesịrị ịme ụbọchị nnwere onwe 1 January. 1 N'ọnwa Julaị dabara na nnwere onwe nke Mahadum New South Wales site na ikike Board Board 1 July 1954. Dị ka Don Wright si kwuo, ụmụ akwụkwọ tụgharịrị ụbọchị nnwere onwe dị ka ememe nnwere onwe nke Mahadum Newcastle site na Mahadum New South Wales. Ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ikike inye mmemme ihe ọ bụla masịrị ha. Eziokwu ahụ bụ na ha kpọrọ ya 'ụbọchị nnwere onwe' mere ka ụmụ akwụkwọ ghọtakwuo mkpa nnwere onwe na mkpa ha nwere ịgbachitere ya megide nnyonye anya n'èzí..
na 1989, Ndozigharị ndị Dawkins jikọtara ụlọ akwụkwọ Hunter nke Mmụta Elu na Mahadum Newcastle. E hiwere kọleji ndị nkuzi Newcastle na 1949 ma emechaa kpọgharịa ya Newcastle College of Advanced Education na n'ikpeazụ Hunter Institute of Higher Education ebe ọ gbasawanyere onyinye mmụta ya karịa agụmakwụkwọ onye nkuzi rue nọọsụ., ọrụ ahụike ndị ọzọ metụtara, azụmahịa, na nka nka. Ụlọ ọrụ Hunter nọ n'ọtụtụ ụlọ dị na ala dị nso na Mahadum dị na Callaghan na njikọta gbasara ụlọ akwụkwọ ahụ ruo ụfọdụ. 140 hectare. N'okpuru mgbanwe, Mahadum ahụ nwetakwara ngalaba Newcastle nke NSW Conservatorium of Music nke dị na mpaghara azụmahịa etiti obodo.
na 1998, mahadum guzobere mmekorita ya na Institut Wira, ụlọ akwụkwọ azụmahịa nkeonwe nke Malaysia. na 2002, Ụlọ ọrụ Ian, onye nkuzi, dara ọtụtụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ sitere na Wira maka emeghị ihe n'eziokwu agụmakwụkwọ, mana nchịkwa Newcastle tụgharịrị omume ya wee hapụ ya. Ọ rịọrọ arịrịọ na Kọmitii Nnwere Onwe New South Wales megide nrụrụ aka, nke mere nchọpụta nrụrụ aka megide Dr Paul Ryder, ọdịda onye osote onye isi ala Roger Holmes mere na -arụ ọrụ ya ma tụọ aro ka ọ na -adọ onye osote onye isi oche aka, Prọfesọ Brian English.
na 2003, Mahadum Newcastle, ya na mahadum Australia ise ndị ọzọ (Macquarie, La Trobe, Flinders, Griffith na Murdoch) guzobere Mahadum Nchọpụta Ọhụrụ Australia (IRUA).
Afọ iri anọ ka enwetara nnwere onwe, Mahadum Newcastle ewepụtala ọmarịcha ọnọdụ na ọkwa mahadum mba na mba; Edebere ya na ogo 10-14 38 mahadum dị n'Australia site na Mahadum Shanghai Jiao Tong na 215th n'ụwa site na Times Higher Education Mgbakwunye na 2007.
Mahadum ahụ wepụtara akara ọhụrụ na 31 March 2007 dị ka akụkụ nke ika na -eme ka ọ dị ọhụrụ iji kwekọọ onyonyo mahadum ahụ na ntụzịaka ọhụrụ ya.
on 11 Ka 2007, mahadum ahụ wepụtara kampos na ogige abụọ nke PSB Academy na Singapore. on 30 July 2015, Onye isi ala Tanzania Jakaya Kikwete bụ onye isi ala mbụ nwetara asambodo nsọpụrụ (Dọkịta nke Iwu) site na mahadum.
Ị chọrọ tụlee Mahadum Newcastle ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Mahadum Newcastle na maapụ
photos: The University of Newcastle ukara Facebook
Mahadum Newcastle na -enyocha
Jikọọ na -atụle nke The University of Newcastle.